Progressive Voice Myanmar » Statement from Diplomatic Missions to Myanmar on World Press Freedom Day
May 3rd, 2021 • Author: Diplomatic Missions (Australia , Canada , Czech Republic , Denmark , EU , Finland , France , Germany , Italy , Netherlands , New Zealand , Norway , Korea , Spain , Sweden , Switzerland , UK and U.S.) •2minute read
ကြေညာချက်လက်မှတ်ရေးထိုးရာတွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံလည်း ပါဝင်လာသည့်အတွက် အသစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် သံတမန်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ထုတ်ပြန်ချက်
ယနေ့ကျရောက်သော ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့တွင် အွန်လိုင်းနှင့် ပြင်ပ၌ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို ထိန်းသိမ်းရာ၌ စာနယ်ဇင်းကဏ္ဍ၏ အရေးပါအရာရောက်မှုကို လေးစားဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်သည် ဒီမိုကရေစီ ကျင့်သုံးသော လူမှုအသိုက်အဝန်းများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး အကြွင်းမဲ့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးကာ မကွယ်ပျောက်စေသင့်သော တရားဝင်ဖြစ်မှု ရင်းမြစ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ စာနယ်ဇင်းသမားများအနေဖြင့် လက်တုံ့ပြန်ရန်ရှာခံရမည့်အန္တရာယ် သို့မဟုတ် ခြိမ်းခြောက်ခံရမည့်အန္တရာယ်ကို ကြောက်ရွံ့စိတ်ကင်းစွာဖြင့် လွတ်လပ်မှုရှိရှိ သတင်းတင်ပြခွင့် ရှိရပါမည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စာနယ်ဇင်းသမားများနှင့် မီဒီယာဝန်ထမ်းများသည် ဖိနှိပ်မှု၏ ဦးတည်ရာဖြစ်လာလင့်ကစား တိကျသေချာသော သတင်းအချက်အလက်များကို လက်လှမ်းမီခွင့် ရရှိအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသူများ၏ အားထုတ်မှုကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် စစ်အာဏာသိမ်းခြင်းမှအစပြု၍ စာနယ်ဇင်းသမားပေါင်း ၈၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံရပြီး ထက်ဝက်ကျော်ခန့်မှာ ယခုထက်တိုင် ထိန်းသိမ်းခံထားရသည်။
မီဒီယာကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်လွှင့်ရန်သော်လည်းကောင်း တင်ပြရန်သော်လည်းကောင်း ပိတ်ပင်ခံထားရပြီး ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်များကိုလည်း ဖျက်သိမ်း၍ ရုံးခန်းများကိုလည်း ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်။ မီဒီယာအစီအစဉ်အများစုသည် ရပ်ဆိုင်းရန် ဖိအားပေးခံရလျက်ရှိသည်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မည်သည့် လွတ်လပ်သော အဓိက ပုံနှိပ်မီဒီယာမျှ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေခြင်းမရှိဘဲ သတင်းလွှမ်းခြုံမှု၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်ရရှိမှုတို့ကို ထိန်းချုပ်ရန် အင်တာနက်များကို ဆက်လက်ပိတ်ထားဆဲဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ရပ်များသည် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကို ဖိနှိပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော လွတ်လပ်စွာ ထင်မြင်ယူဆခွင့်နှင့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်တို့ကို ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မီဒီယာဝန်ထမ်းများအားလုံးကို ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန်၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးလွတ်လပ်ခွင့် ပျိုးထောင်ရန်နှင့် အင်တာနက်ပိတ်ဆို့မှုများအားလုံးကို ရပ်ဆိုင်းရန် မိမိတို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။
ကောင်းမွန်သော စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် လူသားတို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အဓိကကျကျပါဝင်သည့် လွတ်လပ်၍ အမှီအခိုကင်းသော မီဒီယာကဏ္ဍကို မိမိတို့အနေဖြင့် ဆက်လက် အားပေးပံ့ပိုးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်သည် မီဒီယာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ အခွင့်အရေးသာမဟုတ်ဘဲ မိမိတို့အားလုံး၏ အခွင့်အရေးဖြစ်ပါသည်။
ဩစတေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒိန်းမတ်၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ ဖင်လန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ နယ်သာလန်၊ နယူးဇီလန်၊ နော်ဝေး၊ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ စပိန်၊ ဆွီဒင်၊ ဆွဇ်ဇာလန်၊ ယူကေနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာ သံတမန်အဖွဲ့အစည်းများ
On World Press Freedom Day, we pay tribute to the essential role of journalism in upholding online and offline freedom of expression. Media freedom isacornerstone of democratic societies andasource of legitimacy that should be unconditionally preserved and guaranteed. Journalists must be free to report without fear of reprisal or intimidation.
While journalists and media workers have becomeatarget of repression in Myanmar, we commend the efforts of those striving to ensure access to accurate information. Since the 1 February military coup, more than 80 journalists have been arrested, more than half of them still being detained.
Media companies have been banned from broadcasting or providing information, had their licenses revoked and their offices raided. Most media outlets have been forced to shut down. Today, no major independent printed media is operating in Myanmar and internet shutdowns continue to be used to control news coverage, communications and access to information. These actions suppress media freedom and violate the right to freedom of opinion and expression outlined in the Universal Declaration of Human Rights.
We call for the immediate release of all media workers, the establishment of the freedom of information and communication and for the end of all internet restrictions in Myanmar.
We will continue to promote and supportafree and independent media as an integral dimension of good governance and human development. Press freedom isaright, not just of media professionals, but of each and every one of us.
The diplomatic missions of Australia, Canada, the Czech Republic, Denmark, the European Union, Finland, France, Germany, Italy, the Netherlands, New Zealand, Norway, Republic of Korea, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom and the United States.
NOTE: This statement has been updated to include additional signatory Republic of Korea